Niakatra tampoka ny isan’ny maty sy ny tranga vaovao: efatra ireo lavon’ny Covid-19 ary 84 ny nifindran’ny valanaretina - ewa.mg
Niakatra tampoka ny isan’ny maty sy ny tranga vaovao: efatra ireo lavon’ny Covid-19 ary 84 ny nifindran’ny valanaretina
News - Niakatra tampoka ny isan’ny maty sy ny tranga vaovao: efatra ireo lavon’ny Covid-19 ary 84 ny nifindran’ny valanaretina
Tena mbola mampanahy fa
miaka-midina. Efatra ireo lavon’ny Covid-19, omaly, araka ny
tatitry ny CCO. Tsy vitan’izany fa nitombo koa ny isan’ireo
Notsaboina tetsy Befelatanana ny
iray amin’ireo lavon’ny coronavirus ary tany amin’ny hopitaly Place
Kabary, Antsiranana, kosa ireo telo hafa. Tafakatra 206, efa
manakaiky ny isan’ireo matin’ny pesta miisa 209, ny taona 2018,
izany izao ireo lavon’ny Coronavirus eto amintsika, hatramin’ny 19
marsa no ho mankaty.
Niakatra be tampoka koa ny
isan’ireo nifindran’ny valanaretina. Miisa ireo 83 tranga vaovao
tamin’ireo fitiliana miisa 300 ka avy eto Analamanga ny 44
amin’izany raha 14 ny any Alaotra Mangoro. Telo ireo tranga vaovao
any Matsiatra Ambony sy i Boeny raha 10 ny any Diana. Miisa fito ny
any Sofia ary roa any Sava.
Miisa 53 ireo marary
Etsy andaniny, miisa 53 ireo marary
mafy ka etsy Befelatanana ny 27 amin’izany. Dimy ny eny amin’ny
HJRA raha telo ny eny Andohatapenaka. Roa ny eny amin’ny CMC
Mahamasina ary « forme grave » iray ny eny Anosiala.
Manampy ireo ny any Fianarantsoa, miisa 12, raha roa ny any Toliara
ary iray kosa ny any Boeny.
Na izany aza, miisa 35 ireo sitrana
ka tafakatra 14 219 izany izao ireo efa nahafeno ny fepetra ho
amin’ny fahasitranana amin’ireo mararin’ny Covid-19,
miisa15 435. Niakatra ho 1 010 izany ireo mbola tsaboina
sy arahi-maso ny toe-pahasalamany.
Miisa 61 631 ny fitiliana PCR vita
raha miisa 6 412 kosa izany ho an’ny ny fitiliana eo anivon’ny
L’article Niakatra tampoka ny isan’ny maty sy ny tranga vaovao: efatra ireo lavon’ny Covid-19 ary 84 ny nifindran’ny valanaretina a été récupéré chez Newsmada.
Iray matin’ny covid-19 : tranga vaovao 231 Analamanga, mirongatra ny any amin’ny faritra
Niampy iray indray ny la­von’ny coronavirus, avy eto Ana­lamanga. Tafakatra 54 izan­y izao ireo namoy ny ainy tamin’ity valanaretina ity. Mihanaka tanteraka koa anefa ny covid-19 ka miisa 378 ireo tranga vaovao, omaly, araka ny tatitry ny CCO. Maro anisa amin’izany ny avy eto Ana­lamanga, ahitana 231 ireo ni­findran’ny valanaretina.Tranga vaovao 61 any Alaotra Mangoro Tsy eto Antananarivo ihany anefa izany fa mirongatra be ny fifindrany any amin’ny faritra. Anisan’izany ny tranga vaovao miisa 61 any Alaotra Mangoro. Faharoa amin’ny hamaroan’ireo tratran’ny covid-19, raha ny tatitry ny CCO, omaly hatrany, aorian’ny eto Analamanga. Mitsinjara ho 35 ao Amba­tondrazaka, 25 ao Mora­man­ga ary iray any Amparafara­vola. Manaraka izany ny any amin’ny faritra Diana.41 ireo nifindran’ny valanaretina any Diana Miisa 41 ireo tranga vaovao any an-toerana ka miisa 22 ao Antsiranana. Roa ao Ambilobe raha 11 ny any Am­banja ary enina ny any Nosy Be. Mahatratra 14 ireo nifindran’ny covid-19 any Boeny. Mihanaka any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany koa ny valanaretina, amin’izao fotoana izao. Ahitana tranga valo any an-toerana raha enina any Analanjirofo ka ao Fenoarivo Atsinanana ny roa ary any Soanierana Ivongo ny telo. Ho an’ny any amin’ny faritra Sava sy Atsimo Andrefana indray, miisa dimy avy izany. Telo avy ny tranga vaovao any Matsitra ambony sy Sofia ka any Mandritsara ny roa ary any Antsohihy kosa ny iray. Tranga iray ihany kosa ny any Atsinanana, anisan’ny foiben’ny valanaretina teo aloha. Baraingo tanteraka ny nampirongatra ny covid-19 any amin’ny faritra, amin’izao fotoana izao.Tafakatra 86 ireo ahina mafy ny toe-pahasalamany Etsy an-daniny, nitombo be koa ny isan’ireo marary mafy «forme grave». Tafa­ka­tra 86 izany ka avy eto Ana­lamanga ny 81 amin’izy ireo. Mitsinjara ho 35 etsy Befe­latanana raha 18 ny eny amin’ny HJRA. Miisa 16 kosa ny eny Anosiala ary sivy ny eny Andohatapenaka. Miampy ny eny Fenoarivo, ahitana marary mafy telo. Manampy ireo ny «forme grave» iray avy any Antsirabe sy Bongolova ary Fianaran­tsoa, raha roa ny any Toliary. Ankoatra izany, miisa 157 ireo sitrana ka tany an-trano ny 1349 amin’izy ireo.Synèse R.Miisa 31 774 ny fitiliana vita. Tafakatra 6 467 ireo nifindran’ny coronavirus hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Mbola tsaboina sy arahi-maso kosa ny toe-pahasalaman’ireo 3 305 ary miisa 3108 ny isan’ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. L’article Iray matin’ny covid-19 : tranga vaovao 231 Analamanga, mirongatra ny any amin’ny faritra a été récupéré chez Newsmada.
Fiara nanao loza
Hatolotra ny Fampanoavana rahampitso ny mpamily nitondra ny kamiao nanao loza teny amin’ny digy Ampitatafika, tamin’ny alin’ny alarobia lasa teo. Tsiahivina fa nandona sarety ny fiara nentiny. Maty tsy tra-drano ny tovolahy roa nanosika ny sarety. Naratra kosa ny namany roa hafa. L’article Fiara nanao loza est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra – «Can 2019»: tsy afaka hilalao i Bapasy sy i Marco
Miala sasatra avokoa ireo ekipa 16 tafita hiatrika ny dingana ampahavalon-dalana, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, taranja baolina kitra, anio. Raha ho an’ny Barea, roa ny mpilalao tompon-toerana tsy afaka hilalao.Efa fantatra avokoa ny fandaharam-potoana, amin’ny ampahavalon-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, taranja baolina kitra. Ny Leopard-n’ny RD Kongo no hidona amin’ny Barean’i Madagasikara, eo amin’izany dingana izany. Fihaonana hotanterahina, ny alahady 7 jolay ho avy izao, manomboka amin’ny 7 ora hariva.Araka ny vaovao voaray, roa ny mpilalao tsy afaka hiatrika izany lalao izany: Ilaimaharitra Marco, eo amin’ny irakiraka, sy i Bapasy, vodilaharana. Noho ny fahazoany karatra mavo roa ny antony tsy ahafahan’i Marco miakatra kianja. Ny faharatrana nahazo azy, nandritra ny fifandonana tamin’i Nizeria, kosa ny an-dRazakanantenaina Pascal.Nambaran’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barean’i Madagasikara, fa mety ho Raveloson Ryan ny haka ny toeran’i Marco . Izy izay voalaza fa ampy lalao tsara ary afaka mitazona io toerana io sady manana ny tanjaka ilaina amin’io fihaonana io. Mety tsy hiova kosa fa i Mamy Gervais, efa nisolo an’i Bapasy, ny eo amin’ny vodilaharana afovoany. Izy izay efa ampy traikefa tsara sady afaka manidy tsara ny fiarovantena malagasy.Na izany aza, eo koa ry Dax sy ry Njiva, mbola afaka mandrindra ny fanafihana eo afovoan’ny kianja. Toy izany koa ry Debakely sy ry Caloin, eo amin’ny fiarovantena. Anjaran’ny mpanazatra anefa ny mahita izay tena azony antoka hampahomby hahazoana fandresena.Ankoatra izay, mila fahamailoana hatrany amin-dry zareo Kongoley izay tonga nandrombaka ny medaly alimo, ny taona 2015, ary niatrika ny ampahefa-dalana, ny taona 2017. Hanala vela rahateo ny Barea, amin’ity. Resin’ny RDC, tamin’ny isa 6 no ho 1, mantsy ny Barea, nandritra ny fifanintsanana ho an’ny “Can 2017”, tany Mahajanga.Tompondaka Toy izao ireo fandaharan-dalaon’ny ampahavalon-dalana :Zoma 5 jolay Kianja Le Caire 07 :00 – Maraoka # Benin 10 :00 – Oganda # SénégalSabotsy 6 jolay Kianja Alexandrie07 :00 – Nizeria # KameroninaKianja Le Caire 10 :00 – Égypta # Afrika AtsimoAlahady 7 jolay Kianja Alexandrie07 :00 – Madagasikara # RD KongoKianja Le Caire 10 :00 – Alzeria # GineaAlatsinainy 8 jolay Kianja Suez07 :00 – Mali # Côte d’Ivoire Kianja Ismailia10 :00 – Ghana # Tonizia L’article Kitra – «Can 2019»: tsy afaka hilalao i Bapasy sy i Marco a été récupéré chez Newsmada.
Asan-jiolahy ao Toamasina : mpamaky trano eo amin’ny tetezana Mainty, saron’ny Fip
Ravan’ny polisin’ny Fip ao Toamasina, ny asabotsy alina teo tao amin’ny fokontany Ta­nambao Verrerie, akaikin’ny tetezana Mainty, araka ny fahafantaran’ny maro azy, ireo tambajotrana mpamaky trano sy mpanendaka miisa dimy lahy izay andiany faharoa raha efa tratra ireo andiany voalohany. Raha ny loharanom-baovao avy amin’ny polisin’ny Fip, avy namaky trano ireto jiolahy ireo ka nitondra entana halatra nitsoaka avy hatrany. Afaka niantso vonjy amin’ny polisy ihany anefa ireo olona niharan’ny vaky trano ka fotoana fohy taorian’izay, ton­ga ny polisy nanara-dia ireto jiolahy ireto. Napetraka ny sakana manerana ny fokontany ka nahitam-bokany izany sa­tria tratra teo am-pitondrana entana halatra ireto andian-jiolahy ireto. Vokany, noraisim-potsiny izy ireo, mbola tratra tany amin’izy ireo rahateo koa ny entana halatra rehetra. Isan’ireo nanara-dia ny tompon-trano ka niaiky fa izy ireo tokoa no tonga namaky ny tranony. Tao anatin’ny fotoana fohy, ranolava ny fahatraran’ny polisy ireo jiolahy mpamaky trano ao amin’ireo fokontany voasokajy ho isan’ny faritra mena ao Toamasina ireto.SajoL’article Asan-jiolahy ao Toamasina : mpamaky trano eo amin’ny tetezana Mainty, saron’ny Fip a été récupéré chez Newsmada.
“Raharaha Danil Radjan”: telo lahy MD eny Tsiafahy, Frantsay iray arahin’ny fitsarana maso
Eo ambany fanaraha-mason’ny fitsarana ilay teratany frantsay tompona orinasa fiambenana iray raha nalefa avy hatrany eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy koa ireo telo lahy voarohirohy tmin’ilay “Raharaha Danil Radjan”…Nidoboka eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy ireo telo lahy mpiambina ao amina orinasa fiambenana iray rehefa avy natolotra ny fampanoavana, omaly. Teratany frantsay iray (ex-legionnaire), tompon’ny orinasa misahana fiambenana iray kosa, eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana. Voarohirohy ho tompon’antoka amin’ny famonoana ilay teratany karana antsoina hoe Ameralli Danil Alibay Radjan ireto voarohirohy ireto. Hita tao anaty “caméra de surveillance” izy telo lahy ireto niaraka amin’ity teratany frantsay ity, araka ny loharanom-baovao voaray hatrany. Herinandro taorian’ny famonoana azy, saron’ny polisy misahana ny ady heloka bevava ireo tompon’antoka amin’izany ka ny zoma 25 septambra no voasambotra teny Ambohijatovo ny lehilahy iray nanao ity vonoan’olona feno habibiana ity, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy. Nitohy hatrany ny famotorana nataon’ny polisy ka ny zoma teo ihany, tratra teny Anosibe ny lehilahy iray faharoa raha teny Ambatonakanga kosa ireo namany. Tsiahivina fa hita faty nifatotra tanana tao ambany rihana ao amin’ny La City Ivandry i Danil, nahitana mangana nokendaina ny tendany.Jean ClaudeL’article “Raharaha Danil Radjan”: telo lahy MD eny Tsiafahy, Frantsay iray arahin’ny fitsarana maso a été récupéré chez Newsmada.
Nampahafantarina, omaly, tamin’ny alalan’ny fivoriana ampitain-davitra ny tetikasa vaovao PMI Measure Malaria (PMM) ho fanamafisana ny antontan-kevitra momba ny fahasalamana manerana ny Nosy, indrindra ny ady hamongorana ny aretina tazo eto amintsika.Fanohizanan ny tetikasa “Measure evaluation”, izay ho tapitra amin’ity taona ity ny PMM. Efa tafapetraka niaraka amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana avy amin’ny fikirakirana ny “Measure evaluation” ny fototra ilaina hanamafisana ny antontan-kevitra momba ny fahasalamana ka tafiditra ao ny fanaraha-maso ny fivoaran’ny aretina tazo. Nofanina ny tompon’andraikitry 200 teny anivon’ny distrika hifehy ny fitaovana fanangonana sy fizarana antontam-baovao tao anatin’izany.Haharitra dimy taona ny fanatanterahana ny PMM ka anisan’ny firenena iray amin’ny 10 aty Afrika hisitraka azy i Madagasikara. Hanokana vola 1 480 000 dolara ampiasaina ho an’ny taona voalohany 2020-202 ny USAID mpanohana ara-bola ny tetikasa. Tanjon’ny tetikasa ny hanome vaovao maro-pototra sy azo ampiasaina rehefa misy fanapahan-kevitra mila raisina ho an’ny fahasalamam-bahoaka eto an-toerana sy any ivelany. Ampiasaina ny teknolojia vaovao hanangonana sy hitaterana izany manomboka eny ifotony, indrindra ho an’ny fanaraha-maso ny fivoaran’ny aretina tazo. Hamolavolana paikady hamongorana ity aretina ity ny antontam-baovao rehetra voangona, hoy ny fanazavan’ny tompon’andrakitra. Hiara-kiasa amin’ny sampandraharahan’ny minisiteran’ny Fahasalamana maromaro voakasika toy ny fahanaraha-maso ny valanaretina, ny ady amin’ny tazo ary ny fahasalaman’ny ankohonana… Ny tetikasa hanamora ny fanatanterahana.Aretina mbola olana ho an’ny fahasalamam-bahoaka ny tazo eto amintsika ary niakatra ny isan’ny marary ho an’ny enim-bolana voalohany raha oharina tmin’ny taon-dasa, araka ny tatitry ny tompon’andraikitra.Vonjy A.L’article Tetikasa vaovao PMI Measure Malaria: hamafisina ny fahazoana antontan-kevitra momba ny fahasalamana a été récupéré chez Newsmada.
Cybercriminalité – Facebook: tompona vondrona «publications» nosamborin’ny polisy
Voasambotry ny polisy ny lehilahy iray tompon’ilay vondrona “Zava-misy eto Madagasikara sy maneran-tany”. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy misahana ny ady momba ny heloka amin’ny “internet” na ny “cybercriminalité”, fanaparitahana sary sy horonantsary mamoafady, fihantsiana adim-poko sy fanompana olona ary fanalam-baraka mpitondra fanjakana, mpanao politika sy ireo olom-pirenena tsotra. Ireo no hita miverimberina ao anatin’ity vondrona “Zava-misy eto Madagasikara sy Maneran-tany” ity ka voatery nandray ny andraikitry ny polisy ka nisambotra ny lehilahy iray tompon’ireo vondrona ireo. Manentana ny rehetra hatrany ny polisy tsy hamoaka vaovao tsy mendrika toy ny hita ao amin’ity vondrona ity satria manimba ny fisainan’ny fiarahamonina malagasy. “Tiana ny manamarika fa anisan’ny tompon’andraikitra feno amin’ireo zavatra aparitany mivoaka eo amin’ny pejy na ny vondrona tantaniny ny administrateur, ny modérateur-n’ny vondrona tsirairay. Noho izany, tokony hanara-maso ny vaovao sy ny zavatra avokaan’ny olona izy ireo”, hoy ny fanazavan’ny polisy. Tokony hampiasaina am-pamendrehana ireny tambajotran-tserasera ireny hialana amin’ny zavatra toy izao.Jean ClaudeL’article Cybercriminalité – Facebook: tompona vondrona «publications» nosamborin’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.